Inbaddan oo kamid ah saaxiibadayda waxay daawadaan filimaan galmo ah. Anigu waxaan ahay wiil 14-sanno-jir ah waxaana ku raaxaystaa daawashada filimaantaasi. Sidoo kale waxaan jeclahay in aan daawado filimaantaan. Laakiin saaxiibadaydu waxay dhahaan waa in ay ahaato mid sir ah. Oo aanan waxna u sheegin dadka waaweyn. Maxay sidaasi u tahay? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno-jir ah waxaana galmo la sameeyay saaxiibtayda. Waxaana kasoo bixiyaa xubinkayga taranka xubinkeeda taranka kahor inta aan biyo iga imaanin. Waxaana kaliya galmo samaynaa waxyar kadib marka uu dhiiga caadada ka istaago. Ama waxyar kahor inta aan la gaarin muddada dhiigeeda caadada ee xigta. Ma dhici kartaa in ay weli uur qaado?
Next Next post: Anigu waxaan ahay gabar 14-sanno-jir ah waxaana galmo la sameeyay saaxiibkayga. Ma aynaan isticmaalin wax uurka ilaaliya. Wuxuu i leeyahay in aanan uur qaadaynin. Maadaama aanan weli ii imaanin dhiigayga caadada. Run miyaa midaasi?